Cabdullaahi Sheekh Xasan “Runtii waxaan aragnaa in Puntland uu dagaal kula jiro Shacabka Muqdisho”. - Awdinle Online
Cabdullaahi Sheekh Xasan “Runtii waxaan aragnaa in Puntland uu dagaal kula jiro Shacabka Muqdisho”.
Guddoomiyaha Xisbiga Nabadda iyo Dimuqraadiyadda Cabdulaahi Sheekh Xasan ayaa ka hadlay ansixinta qoondada Gobolka Banaadir ee Aqalka Sare iyo doodda iyo diidmada ay ka keeneen reer Puntland.
Guddoomiye Cabdulaahi Shiikh Xasan ayaa ugu horeyn Dowladda ayaa xildhibaanada uga mahadceliyey sidii ay uga soo shaqeysay ansixinta xeerka xaqsiinta Gobolka Banaadir.
Previous articleMadaxweyne Uhuru oo sheegay in dhawaan wadankiisa laga qaadi doono xayiraadaha saaran